Himalaya Dainik » शरीरका यी ६ ठाउँको रौँ मिलाउनुस् तर नहाटाउनुस् !
शरीरका यी ६ ठाउँको रौँ मिलाउनुस् तर नहाटाउनुस् !
शरीरमा रौंको निकै महत्व मानिन्छ, पुरुषको छातीमा रौं छ भने त्यसलाई पुरुषत्वको संकेत मानिन्छ । तर पछिल्लो समयमा शरीरको हरेक स्थानमा रौं सफा गर्ने चलन बढ्दै गएको छ ।
शरीरका विभिन्न भागका रौं हटाउनका लागि विभिन्न उपकरण पनि बजारमा पाइन्छ । पुरुषहरुले समेत छातीका रौं हटाउन थालेका छन् । स्त्रीको कपाललाई सुन्दरताको प्रतिक मानिन्छ ।
यहाँ शरीरका विभिन्न भागमा रौं हुनु र नहुनुको महत्व काट्न हुने र नहुने विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
छातीको रौं– उमेर बढ्दै जाँदा पुरुषको छातीमा रौं बढ्दै जान्छन् । पुरुषको शरीरमा हुने हर्मोनका कारण रौं बढ्ने गर्छ । यसको यदि कुनै पुरुषको छातीमा रौं छैन भने यो हर्मोनको कमी भन्ने बुझिन्छ ।
तर छातीमा रौं नहुनु अस्वस्थ हुनुको लक्षण भने होइन । पुरुषको छातीमा हुने रौं नकाट्नु राम्रो मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा छातीका रौं काट्दा अस्वस्थ हुने खतरा समेत हुन्छ ।
आँखामा हुने रौं– पछिल्लो समयमा महिलाहरुले आँखाका परेला देखि आँखी भौं सम्म मिलाउँछन् र काट छाँट गर्छन् ।
तर आँखाको रौंले पनि आँखाको रक्षा गर्छ । प्रदुषणबाट बचाउँछ र आँखामा हुने समस्या कम गर्छ । सके सम्म आँखाका रौं नकाटेको स्वास्थ्यको दृष्टिले रा्रो मानिएको छ ।
नाकमा हुने रौं– नाकमा आउने रौंलाई मानिसहरु हटाउन मन पराउँछन् । तर स्वास्थ्यका दृष्टिले नाकको रौंलाई पनि राम्रो मानिएको छ ।
नाकको रौंले हामीले जीवनका लागि लिने स्वासमा रहेका खराव कुरालाई रोकेर छान्ने काम गर्छ । नाकको रौं ज्यादै ठूलो भएर नराम्रो भएमा सानो पार्नु फरक कुरा हो तर निमिट्यान्न पार्नु राम्रो मानिँदैन ।